Groin Strain (ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Groin Strain (ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Groin Strain (ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း)
Groin Strain (ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ရခြင်းမှာ ပေါင်ခြံနှင့်ပေါင်ရှိ ကြွက်သားများဆီသို့ ဖိအားအများအပြားသက်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကြွက်သားများ အားနှင့်တင်းလိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆတ်ကနဲ တင်းလိုက်ခြင်းများက ကြွက်သားများကို ဆွဲဆန့်စေပြီး ပြဲစုတ်သွားစေနိုင်ပါသည်။
ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်းမှာ ပြေးခြင်း ခုန်ခြင်းတို့လုပ်ရသော အားကစားသမားများတွင် အဖြစ်များ၏။ အထူးသဖြင့် ဆတ်ကနဲ ခုန်ရခြင်း ဦးတည်ချက်ပြောင်းလိုက်ခြင်းတို့က ဖြစ်ရသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်းကို ဘောလုံးသမားများတွင် တွေ့ရများပြီး ဟော်ကီကစားသူ ၁၀% လောက်တွင်လည်း တွေ့ရ၏။
Groin Strain (ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါသည် အလွန်အဖြစ်များ၏။ အသက်အရွယ်မရွေ းဖြစ်နိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်မျာအား းထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Groin Strain (ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ
ပေါင်ခြံနှင့် ပေါင်အတွင်းဖက်တို့၌ နာကျင်ခြင်း
ထိခိုက်မိစဉ် ဂျွတ်ကနဲမြည်ကာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်လာခြင်း
ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်းကို အပြင်းအထန် အဆင့် ၃ ဆင့် ခွဲနိုင်ပါသည်။
1st ဒီဂရီ – ခပ်ပျော့ပျော့သာနာပြီး ခွန်အား သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှု အနည်းငယ်ဆုံးရှုံးခြင်း
2nd ဒီဂရီ – အတော်အသင့်နာပြီး ခွန်အားအနည်းငယ်မှ အတော်အသင့်ဆုံးရှုံးကာ တစ်ရှုးပျက်စီးမှု အနည်းငယ်ရှိခြင်း
3rd ဒီဂရီ – ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်ပြီး ခွန်အား အများအပြားဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကြွက်သားစုတ်ပြဲခြင်းကြောင့် မလှုပ်ရှားနိုင့်တော့ခြင်း
Groin Strain (ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်းမှာ တာတိုပြေးခြင်း သို့မဟုတ် ဦးတည်ချက်ကို မြန်မြန်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဘောလုံးလို ခုခံအားရှိအရာများအား ကန်ပြုရခြင်းတို့မှ ဖြစ်လာပါသည်။ ကြွက်သားအား ဆွဲဆန့်ရသော ကိုယ်ခံပညာ အမြင့်ကန်ခြင်းများက adductor ကြွက်သားကို ပြဲစုတ်စေပါသည်။
ပေါင်ခြံတွင် adductor ကြွက်သား ငါးခုရှိသည်။ သုံးခုကို “တိုသော adductor” (pectineus, adductor brevis and adductor longus) နှင့် တခြားနှစ်ခုမှာ “ရှည်သော adductor” (gracilis and adductor magnus) တို့ဖြစ်သည်။ ပေါင်ခြံဒဏ်မှာ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာမျိုးဆိုသော်လည်း ထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ချေမြင့်သော အချက်များရှိပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Groin Strain (ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
Adductor ကြွက်သားများ အားနည်းခြင်း
Adductor ကြွက်သားများ တောင့်နေခြင်း
Groin Strain (ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကျွမ်းကျင်သူမှ စစ်ဆေးမှုများစွာပါသော စမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
လှုပ်ရှားနိုင်သည့်ပမာဏ – တင်ပဆုံဆစ်၏ လှုပ်ရှားနိုင်သည့်ပမာဏကိုစမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်မိသည့်ကြွက်သားအား ဆန့်ခြင်းတို့က လက္ခဏာများကို ထင်ရှားလာစေနိုင်သည်။ တစ်မျိုးမျိုးသော လှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် ဆွဲဆန့်မှုကို တုန့်ပြန်သော နာကျင်မှုအား ခွဲခြမ်းခြင်းဖြင့် ကုထုံးဆရာဝန်အား ကြွက်သား အရွတ် ပျက်စီးခြင်းရှိမရှိ သိစေနိုင်သည့် အရေးကြီးအချက်များကို သိစေနိုင်ပါသည်။ ခြေထောက်အား ဘေးဖက်ကို ရွေ့စေခြင်းက ပေါင်ခြံကြွက်သားများကို ဆွဲဆန့်လိုက်စေပြီး Flexibility ကို သိစေနိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာသောအားကစားသမားများတွင် ခြေနှစ်ဖက်လုံးမှာ Flexibility ညီမျှပါသည်။
Resisted Muscle Tests – လူနာခြေထောက်ကို လှုပ်ရှားမှုပမာဏတစ်ခုအား ခုခံအားတစ်ခုပေးပြီး လှုပ်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။ လုပ်နေစဉ် နာကျင်မှုကို ဖြစ်စေပါက ထိခိုက်မှုအမျိုးအစား တည်နေရာနှင့် ကြွက်သားခွန်အား စသည့်အချက်များကို ကုထုံးဆရာအား သိစေပါလိမ့်မည်။ Resisted Muscle Tests ကို ကြွက်သားတစ်ခုလုံးအား ခြုံငုံစမ်းမိစေရန် ပုံစံအမျိုးမျိုး စမ်းသပ်သင့်ပါသည်။ (ဆိုလိုသည်မှာ ခြေဆန့်ခြင်း ကွေးခြင်း)
Groin Strain (ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်းမှာ များသောအားဖြင့် သူ့အလိုလို ပျောက်သွားတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်တစ်ခုပေးပြီး အနားယူရန်သာ လိုပါသည်။ ပျောက်ကင်းနှုန်းမြန်စေရန်အတွက် အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
နာကျင်မှုနှင့် ရောင်ရမ်းမှုသက်သာစေရန် ပေါင်အတွင်းဖက်အား ရေခဲဝတ်အုပ်ပါ။ ကျွမ်းကျင်သူများ အဆိုအရ တစ်ကြိမ်ကို မိနစ် ၂၀-၃၀ အား ၃-၄ နာရီခြားတစ်ခါ ၂-၃ ရက်ခန့်သို့မဟုတ် နာကျင်မှုပျောက်သည်အထိ လုပ်ပေးသင့်သည်ဟု ဆိုသည်။
မျှော့ပတ်တီး သို့မဟုတ် တိပ်သုံးကာ ပေါင်ကိုဖိပေးပါ။
အရောင်ကျ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ သောက်ပါ။ NSAIDs များ ibuprofen နှင့် naproxen တို့က နာကျင်မှုနှင့် ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေပါသည်။ သို့သော် လေ့လာမှုများအရ အချိန်ကြာသောက်လျှင် မထူးကြောင်းဆိုသည်။ ထို့အပြင် ထိုဆေးများက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်မှမညွှန်ပါပဲသုံးလျှင် ခဏတစ်ဖြုတ်သာ သုံးသင့်ပါသည်။
တစ်ရှူးပြန်ကောင်းခြင်းအား အားပေးရန် ဆရာဝန်သည် အကြောဖြေအကြောလျော့လေ့ကျင့်ခန်းများကို လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မည်။ ထိခိုက်မှုအပြင်းအထန်ပေါ် မူတည်ကာ ချက်ချင်း သို့မဟုတ် အနားယူသည့်ရက်အတော်ကြာမှ ပြုလုပ်ရနိုင်ပါသည်။ နာကျင်မှုကို ဂိုက်အဖြစ်သုံးရပါမည်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်လိုက်ခြင်းက ပျက်စီးမှုပိုဖြစ်စေရုံသာရှိမည်။
အများစုမှာ ထိုသို့ကုသခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းကြသည်။ သို့သော အမြဲတမ်းတော့ မပျောက်ကြပါ။ အကယ်၍ ဒီနည်းလမ်းများက မသက်သာစေသေးပါဆိုလျှင် ခွဲစိတ်ရန် စဉ်းစားဖိုလိုနိုင်ပါသည်။ ခွဲစိတ်မှုကြောင့် သက်သာစေနိုင်သောလည်း ၎င်းမှာ နောက်ဆုံးမှသာရွေးချယ်ရမည်။ ခွဲပြီးနောက် ယခင်ကလို လှုပ်ရှားနိုင်မှုလယ်ဗယ်ထိ လူတိုင်းပြန်မရောက်တတ်ကြပါ။ ထို့ကြောင့် ခွဲစိတ်မည်ဆိုပါက အကျိုးအပြစ်များကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုကို စဉ်းစားဖို့လည်း လုပ်ပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ပေါင်ခြံဒဏ်ဖြစ်ခြင်း ကိုကုသသည့်နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ပေါင်ခြံကြွက်သားများကို မထိစေသော လှုပ်ရှားမှုအသစ် တစ်ခုခုကိုပြောင်းလုပ်ပါ။ ဥပမာ အပြေးသမားများ ရေကူးပြောင်းခြင်း
အလျင်စလိုမလုပ်ပါနှင့်။ အောက်ပါတို့မဖြစ်မချင် နဂိုလှုပ်ရှားမှုများကို ပြန်မလုပ်ပါနှင့်။
ထိခိုက်မိသောခြေထောက်အား မထိခိုက်သော ခြေထောက်ကဲ့သို့ ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ ရွေးလျားနိုင်ခြင်း
ဒဏ်ဖြစ်သောခြေထောက်က ဒဏ်မဖြစ်သောခြေထောက်ဖက်ကလို သန်မာလာခြင်း
လမ်းလျှောက်၊ ဖွဖွပြေး၊ တဟုန်ထိုးပြေး၊ ခုန်ခြင်း တို့လုပ်လျှင် မနာတော့ခြင်း
1. Groin Pull. http://www.webmd.com/fitness-exercise/groin-pull#1. Accessed 10 Jan 2017
2. Groin Strain. http://www.sportsinjuryclinic.net/sport-injuries/hip-groin-pain/groin-strain. Accessed 10 Jan 2017